Bahrain: Minisitry Ny Fitsaràna Niady Tamin’ny Tonian’ny Famoahana Gazety An-tsoratra Tao Amin’ny Twitter · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2014 1:36 GMT
Nifidy voalohany ireo Bahrainis hatramin'ny 2011 nanombohan'ilay tolom-bahoaka nalaza tao amin'ilay nosy kely izay nofoanan'ireo manampahefana tamin-kerisetra taty aoriana. Miankina amin'izay anontanianao ny tahan'ny fandraisana anjara– ny governemanta milaza fa 51,9 isan-jaton'ireo mpifidy no nandeha tany amin'ireo fandatsaham-bato, raha milaza kosa ny mpanohitra (izay nanao ankivy ny fifidianana) fa teo amin'ny 30 isan-jato teo ihany ny tarehimarika.
Nanoratra izao i Al-Jamri tao amin'ny tsanganana natao ho an'ny matoan-dahatsoratra ny 24 Novambra, nitondra ny lohateny hoe “Mihoatra noho ny adinà isa“:
Toa hita ho tezitra tamin'ilay lahatsoratra ny minisitra — na izay tiany hambara amin'izany. Nandefa bitsika toy izao izy ho valiny:
Nahazo ny Lokan'ny CPJ Iraisam-pirenena momba ny Fahalalahan'ny Asa Fanaovana Gazety ny taona 2011 moa i Al-Jamri no sady anisan'ny mpiara-nanorina ilay gazety. Nampijaliana ka niafara tamin'ny fahafatesana mihitsy ny taona 2011 ny iray tamin'ireo nanangana io, i Kareem Fakhrawi.
Mpifaninana miisa enina amin'ireo 40 ihany no tafita tamin'ny fihodinana voalohany tamin'ireo fifidianana, izay nomarihan'ireo tatitra nilaza fa nanolotra fanomezana hiantsoana ny olona ny governemanta, tafiditra ao anatin'izany ny fahazoana anjara toerana voalohany amin'ny fahazoana asa ary ireo tolotry ny fanjakàna, ho an'ireo izay nandeha nifidy ary finday iPhone ho an'ireo mpianatra nifidy. Hatreto dia nahazo isa 4.197 ny mpandresy tamin'ny ankamaroan'ireo vato-pifidianana, mitovitovy amin'ny isan'ireo gadra politika vinavinain'ireo mpanohitra.
Ilay vaovaon'ny masoivohon'ny Agence France-Press (AFP) no tiany nolazaina, izay iray amin'ireo mpanao gazety nandrakotra io resaka fifidianana io. Manana tantaranà tsy fanomezana taratasy manome alalana ireo mpanao gazety avy any ivelany na ny fidirany amin'ny faritry ny firenena moa ny governemanta ao Bahrain.
Henjehan'i Bahrain ihany koa ireo mpanao gazety teratany (niofana sy nampitombo fahalalàna tao an-toerana) izay nandrakotra ilay fitroarana.
Nahazo tsikera maro tamin'ireo vondrona iraisam-pirenena mpiaro ny zo moa ny rafitry ny fitsaràna ao Bahrain, indrindra taorian'ny fitsirhana haingana ireo olona an-jatony nandalo fitsarana tsy ara-drariny ny taona 2011. Nilaza izao i Joe Stork, tale lefitry ny Human Rights Watch any Afovoany Atsinanana : “tsy ny tsy fandehanan'ny rafitry ny fitsaràna araka ny tokonyu ho izy no olan'i Bahrain, fa kosa ny fisian'ny rafitra avo lenta amin'ny fitsaràna tsy ara-drariny.”
Tao anatin'ny tahotra no nizotra ireo fifidianana tao Bahrain, izay heloka ny fisitahana ara-politika, mahantra ny fahalalahana maneho hevitra, ary manohana ara-bola ny politikan'ny fisamantsamahana tsy an-kiteniteny ny fanjakàna. Izao ny fanontaniana, inona no lanja ananan'ny fifidianana raha manana ireo zavatra rehetra ireo izy?